WhatsApp anaghị arụ ọrụ, lelee ma ọ daa | Akụkọ akụrụngwa
WhatsApp anaghị arụ ọrụ, lelee ma ọ daa
Ruo oge ụfọdụ, ọ dị ka ọ bụrụla ọnọdụ nkịtị ọrụ izi ozi WhatsApp kwụsịrị ịrụ ọrụ. Ọtụtụ mmadụ dabere na ọrụ izipu ozi a n'efu ebe ọ bụ onye nwere ọtụtụ ndị ọrụ. N'ihe banyere nkwụsị ọrụ, SMS abụghị nhọrọ ọ gwụla ma etinyere ya na atụmatụ anyị na ụlọ ọrụ ekwentị anyị nwere.
Ihe mbụ ị ga - eme mgbe ngwa ahụ malitere inye nsogbu, bụ iji chọpụta ma ọrụ ahụ adaala ma ọ bụ na anyị nwere nsogbu na ngwaọrụ anyị, nke nwekwara ike. Iji lelee ọnọdụ ọrụ ahụ anyị ga-abanyerịrị ngalaba Ntọala ahụ.
N'ime Ntọala anyị nwere nhọrọ abụọ: Ọnọdụ netwọk na Ọnọdụ sistemụ. Nke mbu kwesịrị igosi Njikọ. Ọ bụrụ na anyị pịa nhọrọ nke abụọ, Ọnọdụ sistemu, a ga-egosipụta akaụntụ Twitter WhatsApp ebe a na-ebipụta usoro sistemụ, ọ bụ ezie na ọ ga-egbu oge.
Ihe ọzọ ịlele ma ọ bụrụ na ọrụ WhatsApp na-arụ ọrụ nke ọma bụ ịga na ibe ahụ okwudelina.es. Ọrụ nke weebụsaịtị a dabere na echiche ndị ọrụ gosipụtara nsogbu na-egosipụta, ya mere eziokwu nke ozi nwere ike ịbụ n'etiti kwuru. Na kọlụm aka nri anyị nwere ike ịhọrọ obodo ebe anyị ga-elele ma ọ bụrụ na ndị ọrụ ekpesala nsogbu na ngwa izipu ozi a.
Gịnị ka anyị ga-eme ka nsogbu ndị ọzọ ghara ịda anyị aka?
Ọ dị mma mgbe niile ịnweta ụzọ ọzọ. Machi nkwukọrịta na otu ngwa izipu ozi pụtara ịbecha kpamkpam mgbe ngwa ahụ dara, eziokwu na dịka ndị ọrụ nke ngwa a, ị ga-ekwenyela na n'oge na-adịbeghị anya, kemgbe ịzụta Facebook, ọ mere n'ọtụtụ oge.
Ugbu a n'ahịa, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ maka WhatsApp maka ihe masịrị ha niile:
telegram Y’oburu n’acho igba ososo, ihe di nkpa, ihe nzuzo na inwe ike ide ihe na komputa anyi bu ihe kachasi nma. Ọ na - enye anyị ohere izipu akwụkwọ ederede, ma ha bụ .DOCX .XLSX ma ọ bụ .PDF. Ọ dị maka nbudata kpamkpam n'efu na enweghị ụgwọ kwa afọ.
Viber.Nke a ngwa ngwa ngwa ngwa, nke e ji mara ya acha odo odo, na mgbakwunye na ike izipu ozi na-enye anyị ohere ịkpọ oku n'etiti ndị ọrụ n'efu na ekwentị ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka na mba ndị ọzọ na ọnụego dị ala. M na-eji ọrụ oku na-eme kwa ụbọchị na ndị ahịa m si mba ọzọ na ogo oku ahụ, ọbụlagodi na 3G, dị mma. Ọ nwere ụlọ ahịa nke ya nke na-enye anyị ihe ọ bụla kwa ụbọchị nke na-egosi isiokwu. O nwekwara ngwa maka desktọọpụ, nke na-enye anyị ohere ịga n'ihu na mkparịta ụka anyị site na kọmputa anyị. Free ngwa na-enweghị kwa afọ ụgwọ.
Line. Karịsịa, nke a bụ ngwa m kachasị amasị m, ebe m hụrụ ya maka ndị na-eto eto, nwere ọtụtụ eserese na ngwa nke na-enye anyị ohere ịhazi mkparịta ụka anyị kachasị. Site na ngwa anyị nwere ike ịkpọ na oku vidiyo n'etiti ndị ọrụ na ekwentị na ekwentị mkpanaaka na mba ọzọ na ọnụego asọmpi. Ọ dị maka nbudata kpamkpam n'efu na enweghị ụgwọ kwa afọ.
Blackberry ozi. Dị ka ọ na-eme n'oge na-adịbeghị anya n'ihe ọ bụla Blackberry na-eme, ọ bịarutela n'ahịa ngwa ngwa izipu ozi ozugbo ọ họọrọ ịnye ọrụ ya na mpụga nke usoro okike Canada. Ọrụ ahụ na-arụ ọrụ site na PIN, nke na-enye anyị ohere nyocha ndị anyị chọrọ ka anyị na ha nwee mmekọrịta, ebe ọ bụ na-enweghị PIN ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịnweta ozi. Ihe PIN ahụ, n'otu aka, dị mma, mana na nke ọzọ ọ na-egbochi ma na-agbasikwa ike, na mbụ, na-enwe nkwukọrịta na onye na-agwa anyị okwu. Free ngwa.
Skype. Anyị na-ahapụ ọrụ nke Microsoft nyere dị ka nhọrọ ikpeazụ ebe ọ na-esiri ike iji ya mee ihe na ọ nwekwara ike ịbụ ihe ọzọ na ngwa ngwa ozi ngwa ngwa, ebe a mụrụ ya na ebumnuche bụ isi ịkpọ oku IP n'efu n'etiti ndị ọrụ na akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na anyị na-akpọ oku na ekwentị ma ọ bụ mobiles. A na-ejikwa ya iji jide nzukọ vidiyo ma ọ bụ nkata n'etiti ndị ọrụ. Ọ dị maka nbudata kpamkpam n'efu na enweghị ụgwọ kwa afọ.
Ngwa ndị a niile dị na nyiwe mkpanaka iOS niile, gam akporo na Windows ekwentị, ma e wezụga maka Blackberry Messenger ngwa nke nwere naanị nsụgharị maka iOS na gam akporo.
Buru n'uche na ụdị ngwa a, na-ejikọkarị na netwọkụ, na-eri ọtụtụ batrị, yabụ Ọ bụghị ihe amamihe dị na ịwụnye ndị ọzọ niile na WhatsApp, naanị ndị anyị ga-eji mgbe mgbe.
Onwe ya, A na m eji ma etinyere ngwa izi ozi ato: WhatsApp (ọ bụ ihe a kacha eji mee ihe), Telegram (ọrụ ya ngwa ngwa) na Viber (ogo ya dị mma).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » WhatsApp anaghị arụ ọrụ, lelee ma ọ daa
Esi gbanyụọ ọrụ aka na Windows 8.1
[E3 2014] Anyị na-enyocha ogbako Sony